6 Voasambotra tamin'ny kolikoly tsotsotra amin'ny TCDD | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 066 Voarohirohy tamin'ny kolikoly atsofoka ao amin'ny TCDD
16 / 02 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, Railway, ANKAPOBENY, Headline, TORKIA
Nosamborina tamin'ny kolikoly tao amin'ny tcdd ny olona voasambotra
Mamaly ny fanontanian'ilay solombavambahoakan'ny CHP Istanbul Mahmut Tanal, Minisitry ny fitaterana Mehmet Cahit Turhan dia nilaza fa olona 6 no voaroaka tamin'ny fanompoana sivily ary mpiasa 1 no voasazy hotapahina isam-bolana.
Turhan dia nilaza fa ny famotopotorana miisa 2019 momba ny kolikoly «créap» no «andefasana ny taona 2020-8, 5 no vita, ary ny 3 kosa mbola nitohy. Nampahafantatra i Turhan fa ny fanenjehana koa dia nanenjika ny raharaha.
Tanal, ny CHP, nangataka ny hananganana vaomiera mpikaroka ao amin'ny fivoriambe noho ny fanaovana kolikoly amin'ny andrim-panjakana.
Ny solombavambahoakan'ny CHP Istanbul Mahmut Tanal dia nitondra ny fiampangana fa "nivarotra tsy ara-dalàna no novidiana" tao amin'ny TCDD tamin'ny fandaharan'asan'ny Antenimiera tamin'ny alàlan'ny fametrahana fanontaniana.
Tanal, Minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Mehmet Cahit Turhan;
Misy ihany ve ny fanadihadiana momba ny fitantanan-draharaham-panjakana na fitsaràna natomboky ny TCDD noho ny fivarotana mpivarotra tsy ara-dalàna?
Misy mpiasan'ny TCDD, tompon'andraikitra, bureaucrats izay anaovana famotopotorana, naato, foanana, foanana, voasazy miaraka amin'ny fitakiana «kolikoly« scrap »?
Marina ve fa tapahina sy esorina ao amin'ny Sivas Bostankaya Station ny sarety izay mbola tsy lany daty?
Nametraka fanontaniana izy.
TOROHEVITRA MINO: FIVORIANA INDRINDRA 8 DIA TOKONY TOKOA
Namaly ny valin'ny fanontanian'i Mahmut Tanal an'ny CHP, ny minisitra Turhan dia nilaza fa 8 ny famotopotorana efa vita, ny 5 no vita, ary ny 3 dia mbola mitohy amin'ny TCDD. Nanazava i Turhan fa olona 6 no voaroaka tsy hanao fanompoana sivily noho ny fihetsika 'fanaovana kolikoly "ary olona miisa 1 no nahazo sazy isam-bolana.
Nilaza ny minisitra Turhan, "2019 ny famotopotorana / famotopotorana tamin'ny taona 2020-8 momba ny fitakiana toy ny varotra tsy ara-dalàna, ny kolikoly ary ny halatra, ny 5 amin'izy ireo no vita ary ny telo amin'izy ireo dia mbola eo am-panaovana famotorana. Olana roa no natolotra ny Lehiben'ny mpampanoa lalàna. Teo anelanelan'ny taona 3 ka hatramin'ny 2, olona iray no voasazy noho ny sazy nanapaka 2010 volana nanomboka volana isam-bolana sy olona 2020 noho ny fanesorana azy noho ny hetsika «kolikoly« scrap ». Ankoatr'izay, tsindraindray ny tatitra no anaovana fanadihadiana ary natomboka ny fitantanana, ary aseho amin'ny mpampahalala azy ny fifanakalozana. ”
Ny fandavany ny filazana fa ny sarety izay mbola tsy lany dia nesorina sy notapahina tao amin'ny Sivas Bostankaya Station, hoy i Turhan hoe: "Ny sarety tany Sivas Bostankaya Station dia natao tamin'ny 1954, ary nanolotra tolo-kevitra momba ny sarety tsy azo nampiasana azy ireo ary ny fanamboarana azy tsy misy toekarena. ary nisy ny fanapaha-kevitra hanafoana. Raha ny voalazan'ilay lalàna dia ny varotra tamin'ny alàlan'ny sarety napetraka dia natao tany amin'ny Fikambanan'ny Mpitondra Fanaovan-tsolika sy Chemical Chemical (MKEK), Management Management (HURDASAN A.Ş.). Tsy mbola vita ny sarety sy ny tapaka amin'ny sarety tsy lany daty
TOROHEVITRA HANJAKA HO AN'NY MPANJAKAN'NY FAMPISEHOANA NY FIVORIANA AN-TRANO FANDROSOANA AN-KORAKA
Nandritra izany fotoana izany dia nangataka ny solombavambahoaka CHP Istanbul Mahmut Tanal fa ny Vaomiera Fikarohana dia hapetraka ao amin'ny Antenimieram-pirenena Tiorka lehibe hamaritana ny fepetra tokony horaisina hisorohana ny "kolikoly" ao amin'ny sampam-panjakana sy fikambanana amin'ny alalàn'ny fandinihana ireo fiampangana fa namidy am-bavany tsy ara-dalàna.
Tanal, izay nanome tolo-kevitra fikarohana ho an'ny fiadidian'ny fivoriambe miaraka amin'ny solombavambahoaka dia nanintona ny saina ho any amin'ny vaovao momba ny akanjom-by vy an-taonina 600 taonina notehirizina tao amin'ny trano fivarotan-tanànan'i Düzce, izay ny tombam-bidin'ny tsena dia tombanana ho 400 TL, tsy hita, ary ny toe-javatra any TCDD. Tsy tokony hiteny isika hoe "scrap". Ny Antenimiera dia tsy maintsy manao ny anjarany amin'ny famotopotorana ny fiafaran'ny fantsom-panjakana sy ny fiampangana ny hoe "kolikoly".
Tanal, na ny fivarotana andalany amin'ireo andrim-panjakana sy andrim-panjakana, munisipaly, oniversite ary vondron-tafika na namidy no natao ho an'ny olona tsy miankina, ohatrinona ny vola azo tamin'ny fivarotana ireo andramena, na ny fivarotana an-tsokosoko amina andrim-panjakana dia voarakitra na tsy efa lany daty. Namaritra izy fa tokony hovaliana ny fanontaniana na voahosotra na naseho ho fanaka ny fitaovana.
Vono olona avy ao amin'ny Highroad Warehouse no nosamborin'ny olona avy any Tonizia
Ny olona mangalatra tariby fanamafisana ny tariby voasambotra
Nosamborina ny olona 4 noho ny nangalatra kabone tamin'ny fananganana YHT
Ny olona mangalatra ny telegrama elektrika avy amin'ny tranobe fanorenana Marmaray nosamborina
Ny olona 8 navoaka tao amin'ny TUDEMSAS dia nalefa tany amin'ny fitsarana ny olona 13
6 Isam-bolana 376 An'arivony 288 An-tapitrisany 2 Tapitra dia nandalo tamy ny Kocaeli Terminal
Ireo izay nangalatra lalamby ho an'ny lalamby ho an'ny fanjakana dia nosamborina
Nosamborina noho ny fihenan'ny fiarandalamby fiarandalamby tany Konya
Ny olona voampanga amin'ny fangalarana ny vatofantsika sy ny fisamboaram-basy dia nosamborina
Nogadraina ireo mpangalatra izay nangalatra kabila avo lenta avy amin'ny TCDD | Bilecik
Voasambotra noho ny fangalarana tariby avy ao amin'ny andian-dalamby ny halatra 2
Nosamborina ny mpiasa 100 teo aloha sy ny mpiasa taloha ao Etazonia
Tafiditra ao amin'ny sampan-draharahan'ny orinasa TCDD misambotra any amin'ny seranan-tsambo
Nisy olona iray ahiahiana nosamborina tao YHT Sabotage
Mifandraisa mivantana Mahmut
Sivas Bostankaya gara